နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Hydroponics > အလွှာ Hydroponics > ကိုကိုသစ်ဆွေးအိတ် Hydroponic
ကိုကိုသစ်ဆွေးအိတ် Hydroponics, လက်ရှိကျနော်တို့ USA, ဗြိတိန်, စပိန်, တောင်ကိုရီးယား, နယ်သာလန်မှဖောက်သည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမိတ်ဖက်၏ပံ့ပိုးမှုရှိခြင်း, ငါတို့သည်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာသင်၏တံခါးကိုတိုက်ရိုက်သင်တို့၏မှာယူမှုနိုင်ကြသည်။
ကိုခိုပေါ်ရှိသစ်ဆွေးအိတ် hydroponics,Currently we work with clients from USA,UK,Spain,South Korea,Netherlands.Also ,having the support of our reliable logistics partner we are capable of shipping your orders directly to your door atabest Price.
ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးအတွက်ကိုကိုသစ်ဆွေးအိတ်အလွှာမှ Hydroponics သည်ထိရောက်သောယိုစိမ့်စေသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြီးထွားလွယ်သောအိတ်သည်ကြီးထွားလာသည့်အလတ်စားနှင့်ပြည့်နေသောပလတ်စတစ်အိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးအပင်များကိုစိုက်ပျိုးရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ကြီးထွားလာသည့်အလတ်စားမှာများသောအားဖြင့်စိုစွတ်သောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သောသစ်ဆွေး၊ ဆံပင်၊ တူးဖော်သောစိမ်းလန်းသောစွန့်ပစ်မှု၊ တစ်ရာသီစိုက်ပျိုးရန်အတွက်လုံလောက်သောအာဟာရများပေါင်းထည့်ပြီးနောက်ဆုံးအသုံးပြုသူသည်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ရေလောင်းခြင်းများသာလိုအပ်သည်။
ကိုကိုသစ်ဆွေးကြီးထွားမှုအိတ်များသည်စတော်ဘယ်ရီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီး၊ ကိုခိုပေါ်ရှိသစ်သီးအိတ်များသည်ပန်းပွင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောမီဒီယာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားသောအိတ်များသည်ဖိအားများသော compir coir တစ်ခုရှိသည်။
item: ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးအတွက်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အိတ်အလွှာရှိမြေအောက် Hydroponics
အရောင်: အတွင်းအနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်
ပစ္စည်း - ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဖြင့် 100% Virgin PE ဖြစ်သည်
ပုံနှိပ်ခြင်း - ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရ
အရွယ်အစား: 100 * 20 * 10cm, 100 * 15 * 15cm, 100 * 15 * 10cm
အထူ: 80micron - 120micron
သုံးအလွှာပူးတွဲ extureded ရုပ်ရှင်
compressed coco ပေါ်ရှိသစ်ဆွေးအိတ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ / ကိုခိုပြား
100 x 18 x4cms (စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်)
100 က x 18 x ကို 16 cms (စိတ်ကြိုက်)
70% ကိုကိုးပေါ်ရှိသစ်ဆွေး 30% တိုတောင်းဖိုင်ဘာ / 100% ပိုးခိုပေါ်ရှိရောနှော
၁ ခုထက်နည်းသော (စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်း ၁း၁.၅)
6 ကနေ7အထိ
U.V. ကုသ (3 နှစ်) Poly အိတ်;
အတွင်းအနက်ရောင်အပြင်ဘက်အဖြူ / အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်အနက်ရောင်
40 'HC FCL အတွက် 20 pallets
40'HC FCL လျှင်ဝန်စွမ်းရည်
3.ထုတ်ကုန် Feature And Application
ကိုခိုပေါ်ရှိသစ်ဆွေးအိတ် hydroponics :tomato, cucumber, eggplant, pepper, pumpkin, leafy vegetables
အသီး: စတော်ဘယ်ရီ, Raspberry, ဘလူးဘယ်ရီ, ဖရဲသီး, ဖရဲသီး, အသီးစိုက်ပျိုးခြင်း
ပန်း: anthurium, နှင်းဆီ, နှင်းပန်း, သစ်ခွ, chrysanthemum, သေးငယ်တဲ့ပန်းပွင့်
အခြားသူများမှာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အပင်ပေါက်များ၊ မှိုများ၊ မြက်ခင်းများ၊
ကိုခိုပေါ်ရှိသစ်ဆွေးအိတ် hydroponics for tomato,cucumber with good feature as following:
၁။ ရေကောင်းရေသန့်ရရှိခြင်းနှင့်အသက်ရှုခြင်းစွမ်းရည်၊ ပန်းပွင့်အိုးများကဲ့သို့သောကွန်တိန်နာများမလိုအပ်ဘဲသင်စိုက်ပျိုးရန်တွင်းများကိုတူးနိုင်သည်။
၂) ၎င်းသည်သဘာဝနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကင်းသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားကုန်စည်ဒိုင်စစ်ဆေးရေး ဦး စီးဌာနမှအပူချိန်မြင့်သောပိုးသတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းပြီးနောက်၎င်းသည် nematodes များကင်းပြီးသဘာဝနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်သင့်တော်သောအညစ်အကြေးများ၊ အသုံးပြုမှုနှုန်းသည် ၁၀၀% အထိသန့်ရှင်းပြီးသုံးစွဲရလွယ်ကူသည်။
ခရမ်းချဉ်သီးအဘို့အကိုကိုသစ်ဆွေးအိတ်အလွှာ Hydroponics, သခွားသီးအုန်းခွံထဲမှာအမျှင်ကနေပြုပြင်ထားတဲ့သဘာဝအော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးအလွှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပိုးကင်း။ အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားရှိသောမြင့်မားသောအပူချိန်အခြေခံဘားသို့ချုံ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အသုံးပြုရန်၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဆင်ပြေသည်ဖော်ရွေ။ အုန်းပင်များတွင်ပန်းပွင့်ကဲ့သို့သောကွန်တိန်နာများမလိုအပ်ပါ။ တွင်းတူးခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်စိုက်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်အစိုဓာတ်မရှိသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ ပန်းများနှင့်အခြားအပင်များစိုက်ပျိုးရန်အလွန်သင့်တော်ပြီး၎င်းတို့ကိုကောင်းမွန်စွာကြီးထွားစေသည်။
ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးများအတွက်ကိုကိုးပေါ်ရှိအိတ်အလွှာရှိရေမှော်အပင်များသည်ဖန်လုံအိမ်များ၊ လသာဆောင်များနှင့်ခြေစွပ်များ၌အကြီးစားစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်။ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးအတွက်ကိုကိုသစ်ဆွေးအိတ်အလွှာမှရေကိုသဘာဝအားဖြင့်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိသုံးဖက်မြင်စိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုသည်။ အပင်များနှင့်ရေနုတ်မြောင်းများကိုအခြားသီးနှံများစိုက်ပျိုးရန်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်သည်။
ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအပင်ညှပ်အိတ်ထည့်ရန်အတွက်ပိုးခိုအိတ်အိတ်အလွှာ Hydroponics ။
၇ ရက်အတွင်းခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကိုခိုပေါ်ရှိအိတ်အလွှာ Hydroponics ။
ပေ ၄၀ HC
100 က x 18 x ကို 4
100 က x 18 x ကို 16
100 က x 20 x ကို 4
100 က x 20 x ကို 12
100 က x 15 x ကို 3
100 က x 15 x ကို 14
120 x ကို 20 x ကို 4
120 x ကို 20 x ကို 12
Jianda Greenhouse ကုမ္ပဏီမှခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးအတွက်ကိုကိုသစ်ဆွေးအိတ်အလွှာ Hydroponics အလည်အပတ်ခရီးစဉ်နှင့်စုံစမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှကြိုဆိုပါသည်။